Iji API Technorati na PHP | Martech Zone
Iji Technorati si API na PHP
Satọde, Febụwarị 24, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Melite: Machị 3, 2007 - Released Technorati ọkwa WordPress ngwa mgbakwunye.
Mmelite: Ọ dị mma na Technorati nwere njedebe ajụjụ kwa ụbọchị. Achọpụtara m n'ụzọ siri ike, ha mechie m. Ọ bụrụ na ị wụnye wijetị, ị ga-ahụ na ọ na-ekwu Njehie na njikọ laghachi na Project Page ka ị wee nwee ike ibudata ma nọrọ na koodu ahụ n'onwe gị. M na-na-na-ewelite koodu nke mere na mgbe ị na-eru Daily òkè nke API oku, ọ ga-agbanwe naanị njikọ "Tinye na Ọkacha mmasị".
N'ịbụ onye na-azụ ahịa nchekwa data site na ahia, enwere m ntụpọ abụọ (ọ dị mma… ọtụtụ karịa abụọ, mana ndị a nwere njikọ a). Ana m arụ ọrụ nke ọma na ebumnuche ọnụọgụ ma ana m arụ ọrụ nke ọma ịhazi na ịhazi ọrụ, ndị mmadụ, ngwanrọ, wdg. Ọbụna a na-ahazi akwụkwọ m (akụkụ aka ekpe nke akwụkwọ akwụkwọ ahụ bụ ngwanrọ na mmepe, aka nri n'akụkụ aka azụmahịa, ala aka nri bụ akụkọ).
Ọnụọgụ ọnụọgụgụ na-eme ka m na-ele Technorati, Google Analytics, na Google Adsense ụbọchị niile, kwa ụbọchị. Techorati bụ otu n'ime ndị na-adọta mmasị m n'ezie n'ihi na ọ na-enye m onye na-ejikọ m. Enwere m mmasị ịga na saịtị ndị ahụ ma hụ ihe ha na-ekwu ma ọ bụ ihe ha hụrụ bara uru. Iji mata ma ọkwa m agbanweela, agbanyeghị, achọrọ m ịme ọchụchọ na blọọgụ m.
Achọrọ m ihe ngwa ngwa ka m wee tinye obere wijetị nke Technorati API iji nweta ọkwá m ngwa ngwa na ngwa ngwa. Ọ bụ n'ezie ihe na-egosipụta ọkwa na elu nke post a. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ otu, kụrụ nke m oru ngo elu.
SPAM nke Daybọchị
Curling na Laptọọpụ… na ndị ọzọ
Feb 24, 2007 n’elekere 2:06 nke abali
ọ pụtara na m ga - abụ onye izizi ga - ekele 🙂 ma mee ka ịmara na m gbaraziri ego a 🙂
Feb 24, 2007 n’elekere 8:53 nke abali
Gbazia, Steven! Nke ahụ bụ ihe blog a gbasara.
Feb 24, 2007 na 1:25 PM
Emere m mgbanwe na-eji obere Technorati logo. A na-emezi ya nke ọma ugbu a. M na-emelite koodu peeji nke.
Feb 24, 2007 na 1:29 PM
ọmarịcha mmetụ 🙂
M nwere ya na-egosipụta na m n'Sitentanet Rankings ederede wijetị - with ruru credit N'ezie 🙂
Feb 24, 2007 na 1:38 PM
Chei, nke ahụ bụ kredit buru ibu! Daalụ nke ukwuu. Echela na a manyere gị idebe nke ahụ. Enwere m obere okwu na HTML nke na-ezo aka na peeji oru ngo.
Feb 24, 2007 na 2:45 PM
Edoziri m ederede LOL ka ọ dị ntakịrị mma.
Feb 24, 2007 na 6:43 PM
Emelitere wijetị na ihe dị mma nke na-enye nkọwa ndị ọzọ gbasara ọkwa gị! Aha Blog gị (dika Technorati) yana njikọ inbound na blọọgụ!
Feb 24, 2007 na 10:22 PM
Nke ahụ bụ ngwa ngwa! Ana m enwetahie ugbu a na Technorati:
Jirila òkè nke ụbọchị gị maka ajụjụ Technorati API.
N'iburu nke ahụ n'uche, agbanweela m posts m ebe a ka ndị mmadụ nwee ike ịnabata koodu ahụ n'onwe ha kama ịkụ saịtị m. Ndo banyere ndị ahụ! Amaghịdị m na e nwere 'onyinye ụbọchị niile'.
Feb 24, 2007 na 10:28 PM
Ọ dị mma na Doug su… oh nke ọma na ọ bụ ihe ọchị mgbe ọ dịgidere. Agbanyeghị na ọ ga - egosi ụfọdụ ewu ewu - ikekwe Teknụzụ ga - achọpụta ma mejupụta ihe yiri ya
Feb 24, 2007 na 10:43 PM
Enwere m olileanya, kwa. Agụrụ m na saịtị ha ma enweghị m ike ịchọta ihe 'òkè nke ụbọchị' bụ, n'agbanyeghị. Ọ na-ewe ntakịrị iwe.
M gbanwetụrụ koodu ka nanị gafere njehie ozi dị ka kwuru HTML n'ihi na ọ dịghị egosipụta “0” na ọ na-eji na-. Ugbu a ọ ga - egosipụta wijetị naanị ma ọ bụrụ na nzaghachi dị mma.
Echere m na nzọ kachasị mma nwere ike ịbụ ịnabata peeji nke isi onwe gị ị nwere ike ime nke ahụ. Aga m edebe gị mgbe m chọpụtara ihe 'òkè nke ụbọchị a bụ'. Daalụ, Steven!
Feb 26, 2007 n’elekere 12:44 nke abali
Ok… ụfọdụ mmezi. Ọ bụrụ n'ị nwaa iji wijetị na-abụghị nke m chọọ URL, ọ ga-agwa gị na enwere mperi wee weta gị na peeji nke ọrụ ahụ. Nke a bụ ka ị nwee ike ibudata koodu ma nọrọ na ya n'onwe gị. Onye ọ bụla nwere ike ịnabata koodu a yana nke ahụ ị gaghị abanye n'ime ekenye API kwa ụbọchị.
M na-gbanwetụrụ ya na ọ bụrụ na ị na-eru Daily Nkesa, ya nanị switches n'ime ihe “Tinye ka Ọkacha mmasị” njikọ!
Feb 27, 2007 n’elekere 11:44 nke abali
M na-eche ka ụmụ Dapper si eme ya? Ma eleghị anya, ha na-enyocha otu ugboro kwa ụbọchị ma chekwaa nsonaazụ ha.
Dapper Screen Scraping maka saịtị ọ bụla
Mar 3, 2007 na 6: 43 PM
Ndi be anyi! Emechara m degharịa nke a n'ime ngwa mgbakwunye WordPress ma ọ na-ekpuchi. Woohooo!
Technorati ọkwa WordPress ngwa mgbakwunye
Tyler Ingram kwuru
Mar 10, 2007 na 2: 56 PM
Achọtara m obere mgbakwunye gị maka Teknorati, agbanyeghị na achọpụtara m na ihe nkesa m enweghị mkpokọta mgbe etinyere PHP5.
Ya mere, m ga-ahụ ma m ga - enweta onye a na - arụ ọrụ: http://samanathon.com/2007/03/10/wordpress-plugin-display-your-technorati-rank-with-php-4/ nke ị nyere aka maka ndị na-anaghị eji PHP5 🙂
Mar 10, 2007 na 5: 21 PM
Chei, Tyler! Amaara m na CURL bụ ihe achọrọ mana amataghị m na ụfọdụ ndị folks agaghị enweta ya. Echere m na nke ahụ bụ ọbá akwụkwọ nke arụnyere na ndabara na ntinye PHP. Naanị m na - eche - mana m na - ekwu na Samanthon na - ejikwa ya mee ihe.
Sep 10, 2008 na 3: 44 AM
Daalụ nke ukwuu! Nke a enyerela m aka ibu ibu.
Ugbu a, m dị nnọọ mkpa tweak ya na ọ ga-zuru okè
Jul 17, 2009 na 4: 20 AM
Onye ọ bụla nwere ihe ọ bụla echiche ihe n'ezie ịgba bụ? Achọpụtara m ụzọ dị oke egwu na-anwale ngwa 🙁
Jul 17, 2009 na 4: 24 AM
Oh oh choputara na o bu 1000… oops, emechara m juo 1000 ajuju taa?
Jul 17, 2009 na 12:02 PM
guitarnoize - dị njikere itinye ụdị usoro mkpuchi dị mfe